Ukufumaneka kwee-AirPod kuncitshisiwe kwintsuku ezingama-3-5 | Ndisuka mac
Ukufumaneka kwee-AirPod kwehla ukuya kwiintsuku ezingama-3-5
Phantse unyaka uthathe iApple ukulungisa iingxaki zesitokhwe kwii-AirPods, ezo ntloko zingenazingcingo ezingenazingcingo eziphumelele kakhulu phakathi kwabasebenzisi beApple. Ngokwenyani ukusukela ngala mhla babekwa kwintengiso, ukubakho kwee-AirPod kugcinwe kwiiveki ezi-6, de kwasekuqaleni kuka-Agasti, xa ukufumaneka kwaqala ukwehliswa kwaya kwiiveki ezi-3-4, ukuya kuthi xhaxhe kwi-1 - 2 iiveki . Okwangoku ukubakho kwee-AirPod kusetelwe kwiintsuku ezingama-3-5 ngeVenkile yeApple ekwi-Intanethi. Ukuba siya kwiVenkile yeApple ebonakalayo, sinokuzifumana ngokuthe ngqo kwisitokhwe.
UTim Cook ngokwakhe uphindaphindiwe ngokungakhathali nokuba bebesebenza ukuphucula ukubakho kwee-AirPod unyaka wonke, kuba kude kube kwezi nyanga zidlulileyo, singakhange sizibone iziqhamo zomsebenzi kaTim malunga noku. Ngexesha lentetho yokugqibela, iApple yazisa isibini sebhokisi yeAriPdos, kuba ii-headphone ngokwazo zibonakala zifana. Esi sizukulwana sesibini sebhokisi, isinika ukutshaja ngaphandle kwamacingo okuhambelana netshaja zeQi Ukongeza kwi-LED yokutshaja eyayibekwe ngaphakathi kuyo ngaphambili.
Ngokuhambisa i-LED yokutshaja ngaphambili kwimeko, siyakuphepha ukuba siyikhuphe kwindawo yokuzalwa ukuyibiza ngaphandle kwentambo ukuze sazi ukuba bahlawuliswe ngokupheleleyo okanye hayi. Esi siqingatha sesibini sesizukulwana seAirPods asikafumaneki kwiVenkile yeApple. Kucwangciselwe ukuba ifike phakathi ku-Disemba, kwaye iya kuba ngexabiso elifanayo nemodeli ebisoloko yentengiso phantse unyaka, ke ukuba ubasemva kwabo, eyona nto intle onokuyenza kukulinda lo mzuzwana isizukulwana ukuba sifike.kwaye usebenzise ithuba lokutshaja ngaphandle kwamacingo okudibanisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ukufumaneka kwee-AirPod kwehla ukuya kwiintsuku ezingama-3-5
Itshaja yodonga Aukey enezihlanganisi ezi-4 ezahlukeneyo zohambo
IMacOS ePhakamileyo yeSierra ayisadibani ne-ID yakho yeApple